‘प्यासन र हार्डवर्क भए असम्भव केहि छैन’ – १८ वर्षीय इथिकल ह्याकर विशाल श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)
By: गण्डकी न्यूज - पुष १६ २०७७ बिहीबार १८:०१-
सूर्य तिमिल्सिना । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको बिकास संगै यसको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिंदै गएको छ । विशेष गरी वेबसाइटको सुरक्षामा ध्यान नपुर्याउंदा बेला बेला नेपाली साइटहरु ह्याकरको निशानामा पर्ने गरेका छन् । नेपालमै यस्ता युवा समेत छन् जसले कुन साइट कत्तिको सुरक्षित छ र ह्याकराले कसरी ह्याक गर्न सक्छ भन्ने टेस्ट गरेर रिपोर्ट गर्न सक्छन् । प्रविधि जगतमा विश्वमै ख्याती कमाएको सोनी,माइक्रोसफ्ट र ओपेराको बग पत्ता लगाएर सर्टिफाइड व्ह्याइट ह्याकरको मान्यता पाएका स्याङजाका १८ वर्षीय युवा विशाल श्रेष्ठ जसले उमेर एउटा नम्वर मात्रै हो,यसले आफ्नो क्षमता देखाउन रोक्दैन भनेर चरितार्थ गरेका छन् उनै संग गण्डक न्युजले गरेको कुराकानी :-
वेभ सेक्युरिटीको क्षेत्रमा नै रिसर्च गर्दै छु । मान्छे कहिले नि कुनै कुरामा निपुण हुँदैन । म अझै लर्निङ फेजमै छु ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रतिष्ठित कम्पनीहरुबाट ह्वाइट ह्याकरको सर्टिफिकेसन पाउँदा कस्तो अनुभव हुँदै छ ?
सुरुमा त मलाई विश्वास लागेकै थिएन तर निरन्तरको प्रयास पछी यो उपलब्धि पाउँदा गर्व लागेको छ । यसले मलाई अझै धेरै गर्नु छ भनेर आत्मबोध समेत गराएको छ ।
भनिन्छ कुनै पनि सफलताको पछाडी संघर्ष र असफलताको कथा नि लुकेको हुन्छ,के भन्नुहुन्छ ?
अवश्य । आज म यो ठाउँमा आइपुग्दा धेरै कठिनाइ हरु बेहोरें जुन शब्दमा समेत व्यक्त गर्न नसकिने छन्। घरमा वाइफाई समेत नभएर मोबाइल डाटा प्रयोग गरेर समेत बग पत्ता लगाउने,प्याचिङ गर्ने काम गर्थें ।
नेपाली साइटहरुको सुरक्षाको स्थिति कस्तो छ ?
एकदम नाजुक छ । नेपाली साइटहरु बनाउँदा यसको सुरक्षालाइ ध्यान नै नदिई बनाउँछन् । जसले गर्दा धेरै नेपाली साइटहरु असुरक्षित छन् जसबाट ह्याकरहरुले सजिलै डाटा चोर्न सक्छन् । साइटहरुको सुरक्षाको टेस्ट नगर्नु नै यसको मुख्य कारण हो ।
पछिल्लो समय वेबसाइट सुरक्षाको लागि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अडिटलाई समेत त्यत्तिकै महत्वको रुपमा हेर्न लागिएको छ नि ?
आर्थिक क्षेत्रमा गरिने अडिट जस्तै साइटहरु कत्तिको सेक्युर छन् भनेर गरिने अडिट नै इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अडिट हो ।सूचना प्रविधिको प्रयोगमा ब्यापक वृद्धि संगै यो त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ ।
अरुले ह्याकर भनेर सम्बोधन गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ ?
ह्याकर भन्ने बित्तिकै नेपालीको मानसपटलमा नकारात्मक सोचाई आउँछ तर पछिल्लो समय इथिकल ह्याकिंगको महत्व बढ्दै जानु र आम मानिसले समेत यसको महत्व बुझेको देख्दा गर्व लाग्छ।
इथिकल ह्याकिङ र वेब सेक्युरिटीको क्षेत्रमा आउन चाहनेलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
यदि तपाईंहरु यो क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाइँ आइटी नै पढेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । सुन्दा अचम्म लाग्ला तर मैले स्कुल लेबलमा समेत इकोनमिक्स पढेको मान्छे अनि +२ मा नेपाली । आज सम्म स्कुलमा कम्प्युटर साइन्स या अन्य कुनै टेक्निकल कोर्ष गरिन तर यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्यासनकै कारण आज यहाँ सम्म आइपुगेको छु । मुख्य कुरो तपाइंको प्यासन र हार्डवर्क नै हो । यदि त्यो तपाईंमा छ भने यो क्षेत्रमा आउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईं वेब सेक्युरिटी रिसर्च संगै सामाजिक क्षेत्रमा समेत त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ नि ?
हामी जस्तो जागरुक युवाले संधै अरुको मुख ताकेर मात्र बस्नुहुन्न । नागरिक स्तरबाट समेत देश बिकासको लागि सक्दो पहल गरौँ भनेर नै बिगत १ वर्ष देखि युवाहरुको समुह दारी ग्याङ मार्फत सामाजिक कार्यहरु गर्दै आइरहेको छु ।
नेपाल सरकारबाट तपाईंको अपेक्षा के छ ?
हामी जस्तो युवाहरुलाई सरकारले नेपालमै केहि गर्ने वातावरणको सुनिश्चित गरोस ।सरकारी डाटाहरु अझै पनि धेरै असुरक्षित छन् यसको सुरक्षामा बिशेष ध्यान दिइयोस|सूचना प्रविधिको विकास नै देश बिकासको मेरुदण्ड हो त्यसैले यसको बिकासको लागि सरकारले बिशेष पहल गरोस भन्ने अपेक्षा छ ।
अन्त्यमा केहि भन्नु छ कि ?
नेपालमा अहिले सम्म इथिकल ह्याकिङलाई कुनै पनि पाठ्यक्रममा समाबेश गरिएको छैन यसलाई कम्प्युटर र सूचना प्रविधिका सबै क्षेत्रको पाठ्यक्रममा समाबेश होस । युवाहरुलाई आफ्नो सिप र क्षमता अनुसार नेपालमै काम गर्ने अवसर प्राप्त होस् भन्न चाहन्छु ।